Home > Coronavirus iyo guryaha
Waa inaad gacmahaaga si joogto ah u dhaqdaa. Dhakhaatiirta adduunka waxay talo ka bixiyaan sidii aad nabad ugu heli lahayd afaf kala duwan.  Ka eeg Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha  iyo websaytyada NHS  wixii macluumaada ee ku saabsan badbaadadaada.
Waxaa jira faa’ iidooyin kale oo aad heli karto haddii aad shaqeynaysay oo aad bixinaysay tabarucaadda caymiska qaranka. Kala hadal Make the Call ama hay'adda talo-bixinta xaafadahaddii  aadan hubin waxa gargaarada aad heli karto iyo sida loo codsado kuwan.
Caawintan waxaad ka dalban kartaa khadka tooska ah ,. laakiin foomku wuxuu ku qoran yahay Ingiriis. Waxaad sidoo kale dalban kartaa adigoo wacaya 0800 587 2750. Raadi talo haddii aad u baahan tahay caawimaad si aad u dalbato.
Kaydkaaga cuntada ee deegaankaaga ayaa ku caawin kara haddii aad runtii xaalad xun ku sugan tahay. La xiriir FareShare  ama Trussell Trust  si aad u ogaato kaydka cuntada ee deegaanka. Waa inaad sidoo kale ka hubisaa kaniisadaha maxalliga ah ama kooxaha samafalka si aad u ogaato haddii wax adeegyo maxalli ah loo sameeyay in lagu caawiyo dadka ka tirsan bulshada.
Bryson Intercultural  waxay ku siin kartaa talo ku saabsan xuquuqdaada iyo wixii caawimaad ah ee aad heli karto haddii aad tahay magangalyo-doon, qaxooti, ama qof codsigiisa magangalyo la diiday.
Adeegga Booliska ee Waqooyiga Ireland  iyo Taageerada Dhibanaha NI  ayaa kaa caawin kara haddii aad tahay dhibane dembi nacayb ah. Raadi talo haddii aad dareento nabadgelyo darro gurigaaga sababta oo ah in lagu soo weeraray ama laguu hanjabay.
Source URL: https://www.housingadviceni.org/sml/coronavirus